Ugu yaraan todobo dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo ku dhintay qarax ka dhacay gaarigii ay la socdeen gobolka Hiiraan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan todobo dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo ku dhintay qarax ka dhacay gaarigii ay la socdeen gobolka Hiiraan
Sawirka: Qarax gaari oo mar hore ka dhacay gudaha Muqdisho.
Beledweyne-(Puntland Mirror) Ugu yaraan todobo dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ku geeriyooday kadib markii gaarigii ay la socdeen uu ku qarxay, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Qaraxa ayaa ka dhacay deegaan la dhaho Durdur oo qiyaastii 40-km dhanka koonfurta ka xiga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalyahanada dhintay ee katirsan Al-Shabaab ay doonayeen in ay weerar is qarxin ah ku qaadaan saldhig ay ciidanka Soomaaliya ku leeyihiin halkaas.
Ma jiraan wax war ah oo kasoo baxay maleeshiyada Al-Shabaab oo ku saabsan dagaalyahanooda qaraxa ku dhintay.
July 29, 2017 Sawir-qaade Mukhtaar Nuur oo lagu xiray Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa duqayn ka geystay gudaha Soomaaliya oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen Taliska Mareykanka ee Afrika shalay oo Arbaco ahayd. Waxay sheegeen in ay dhowr maleeshiyo ah ay [...]